Yakha iPolgonon esekwe kwiibheringi kunye nomgama kwitafile ye-Excel-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Polygon yokwakha ngokusekelwe ndlela yaye amabanga kwetafise Excel
Polygon yokwakha ngokusekelwe ndlela yaye amabanga kwetafise Excel
Makhe sibone ukuba yintoni le ngongoma:
Ndinedatha yokuhamba kunye neebheringi kunye nomgama, kwaye ndifuna ukuyakha kwi-AutoCAD okanye kwiMicrostation. Sasiyibonile ngaphambili loo AutoCAD Inayo ifomu ukondla olu hlobo lwedatha phantsi kwefomathi @dist <ngelixa ukwenziwa kweMicrostation kwenziwe kwi-AccuDraw.
Ewe, ekuphenduleni umhlobo wethu uJames, nantsi itheyibhile:
1 Idatha yegalelo
Ezi zifakwe phantsi kommandla ophuzi, apha ufaka izitishi, umgama kunye nokuhamba njengomzekelo.
2 Ulungelelaniso lokuqala
Oku kungumxholo wendawo eluhlaza, sicinga ukuba siyazi ukulungelelaniswa kwendawo yokuqala. Ukuba awunayo, beka naliphi na ixabiso, ekukhethwa ukuba liphezulu ukuze kungabonakali ulungelelwaniso olubi, njenge-5,000 (amawaka amahlanu)
3 Idatha yemveliso
Le yindawo ephawulwe nge-orange, apho unakho i-x kunye y izilungelelaniso eziqulunqwe ngoluhlu lwe-comma.
4 Indlela yokuyithumela kwi-AutoCAD.
Kulula, "ikopi" yenziwe kwindawo ye-orenji yefayile egqwesileyo, emva koko kwi-AutoCAD umyalelo we-polyline (i-pline) uyasebenza kwaye "unamathisele" wenziwa kwibar yomyalelo. Isiphumo kukunqumleka okuzotyiweyo ukunika indawo yokuvala
Apha unako ukukhuphela iethemplate yokwakha iipolgoni ezisekelwe kwiibherelo kunye nemida etafileni ye-Excel.
Ifuna igalelo lokomfuziselo lokukhuphela, onokwenza ngalo Ikhadi lesikweletu okanye i-Paypal.
Kufanekisela ukuba umntu ucinga ngento ebonelela ngayo kunye nokukhululeka okungafumaneka kuwo.
5 Indlela yokuyithumela kwi-Microstation
Ukukwenza kwi-Microstation Ndidale i-template eyenza into efana nayo, kodwa kwimilo ye-Microstation Key-in command.
Bona itemplate ye-Microstation.
Funda ukuba ungayenza njani le kunye nezinye itemplate kwi Ikhosi yokukopela ye-Excel-CAD-GIS.
Faka idatha ngeenkcukacha kunye nemida kwi-Microstation
Uhlalutyo lwe-Topological kunye ne-Microstation Geographics
bhalela umhleli kwi-geofumadas dot com
ukuze bakunike inkxaso
Ndinengxaki. Xa ndifumene itemplate yonke into isebenza kakuhle, ibifana neminyaka emi-4 okanye emi-5 eyadlulayo
Ndiyisebenzise ngaphandle kwengxaki. Okwangoku ayisebenzi kum xa ndiyincamathisela kwi-Autocad. Ndizamile kwi-Autocad 2013 kunye ne-2017 kwaye akukho nto. Andazi ukuba kuya kufuneka ndibone kwaye ndigqwese, ndisebenzisa u-2019. Ngaphambili bendisebenzisa i-2016.
Hlola i-imeyile yakho, nangona ingafuneki, kukho i-url yokukhuphela.
Sekudala wenze igalelo, ndingayilanda njani ifayile?
Emva koko uza kufuneka wenze ngePaypal.
Anstacio Montoya uthi:
ndiyabona mva mzuzu andinakukwenza ukutshintshwa kokungabikho kwiresi yenkampani apho kukho ukubingelela khona
El nqakraza ibonisa indlela yokuhlawula ngokutshintshwa kwebhanki,
Andizange ndiyisebenzise. Ukuba ayibonakali, sebenzisa iF5 ukuze uyihlaziye.
ubona ubusuku obuhle njengentlawulo ngokudlulisela ukuba ndiyenze ngqo kwi-bhanki kwinombolo ye-akhawunti ndiyibongele ndiyabamkela
Hlola i-imeyile yakho, ngamanye amaxesha iya kwi-spam.
Kufuneka ufumane umyalezo nge-url yokulanda, ephela kwiintsuku ze-4.
Ukuba unengxaki kumxelela umhleli (kwi) geofumadas.com
Alex Mor uthi:
Ndenze intlawulo nge-paypal. Ndingayilanda phi i template?
Eduardo Henriquez uthi:
Ndifuna ukukuxelela ukuba uthumele imali ngo-Pay Pal egameni lakho kwi template ye-Excel
Arturo Salinas uthi:
Kuhle kakhulu, ukwakha kwiCogo yeGGG isetyenziswa
Kufuneka usebenzise i-concatenation kwi-Excel, kodwa usebenzisa i-Line Line.
Emva koko unamathisele kwifayile ye-txt uze uyibize nge-Keyin
Kule nqaku, sichaza indlela.
Ukusa kusasa kubo bonke kunye nokuvuyisana ngomsebenzi olungileyo.
Ndenza ntoni kwi-MICROSTATION ukuze ndingabi nje nje ndihambe kwinqanaba elingufu kodwa kunye nemigca eya kwenza i-polygonal?
Ukugqwesa iphepha lakho elihle! Ugcine!
Kule ngqaku elinye ndipapashile enye indlela yokwenza nge-Microstation, usebenzisa i-concatenation kwi-Excel kwaye kungekhona ifayile ye-txt
Ngaba umntu uyakwazi ukufaka yonke idatha ngexesha elilodwa?
Enyanisweni, inokusebenza nayiphina inkqubo evuma ukulungelelanisa kwile fom.
Mhlawumbi kukho izandiso ze-ArcGIS, kodwa andizange ndithethe ngalesi sihloko apha.
Molo, nje mna ukusindisa ubomi kule post, kwakufuneka ukwenza polygon in ArcGIS ngoko ukusebenzisa le ndlela kwaye zihambelana kuphela ArcMap, hayi xa kukho indlela lula ukwenza le nkqubo okanye ukuba sele ishicilelwe ezinye post ngale, kodwa hey wandinceda kakhulu, bekuya kuba kuhle ukuba sibeka isithuba ukuba kudlula ku ArcGIS. Kunjalo enkosi kakhulu !!!!!! Siyavuyisana kweli phepha, saludooooos.
Uncedo, ngoku ukuba ipholigoni ishiywe… ^ _ ^
Ukuba uyitshintsha kwiWindows
Qala, ipaneli yokulawula, indawo
Emva koko, ukhetha ilizwe apho ukhona kwaye ngale nto kufuneka ube neengqinisiso ezifanelekileyo kunye neefowuni kwindawo engasini, ngaphantsi apho imizekelo ikhona. Okokuqala, kukho iinombolo.
Ukuba zibonakala zingachanekanga apho, nokuba ukhetha ilizwe lakho, emva koko ucinezele iqhosha elithi "yenza ngokwezifiso" kwaye apho utshintshe ifomathi yesimboli yedesimali kunye namawaka isimboli yokwahlukana.
Ndiyinkathazo yokufumana umzobo kwi-autocad, ingxaki ihamba ngolu hlobo lulandelayo.
Ingxaki iseteleni lesigxina seofisi yam kufuneka ndikwazi ukutshintsha i-comma (,) nge Point (.) Ndine-2007 ofisi.
Kubonakala kum ngolu hlobo lulandelayo:
apho kufuneka kubekho ixesha (.) kukho i-comma (,) uncedo lwam nceda. !!
Molweni nonke, bendisebenzisa i-MicroStation ye-cadastre iminyaka emininzi kwaye ndifuna nje ukongeza kwiminikelo emihle kakhulu yabalingane bam ukuba bafuna ukongeza i-polygon ukongeza kumanqaku, inkqubo ilula kakhulu. Kwi-header txt sheet sibhala "beka i-smartline", kulungelelwaniso ngalunye songeza xy= lungelelanisa x, lungelelanisa y. njalo kubo bonke. kwi-Key-in input sibhala @C:\_igama kunye nendawo yefayile.txt Leyo yithiyori yenkqubo ukuba nabani na uyazi enye inkqubo ndiya kuwuxabisa umnikelo.
Ewe kunjalo, iodolo ngu-X-Y
i-francisco hernandez ibharron uthi:
Ndifuna ukwenza isicwangciso kwi-autocad .. kuba ndifaka i-coordinates kunye ne-x kwaye ndifumana i-plane idubule
Ndiyabulela umzalwana ngoncedo, ndisindise umsebenzi omningi nale tafile, ndivuyisana ngokuphuhliswa kwefomula, umsebenzi omuhle kakhulu ..
UJuan Luis Córdova uthi:
Andizange ndiyifumane iV8i
Yiyiphi ingcaciso onayo?
V8 okanye iV8i
Kuthekani, sele ndineziko le-microstation, andiyazi ukuba unokundinceda ngenkqubo kwaye ndizama kancane kodwa inezixhobo ezininzi.
Ndiyabulela inkwenkwe ikhangele indawo ye-microstation kunye nenkwenkwe ivume
Ukwenza itafile yemizila kunye nemimitha ihlala kwiSicstation Site, njengokuba awukwazi ukwenza kuphela yi-AutoCAD kodwa abasebenzi baseburhulumenteni.
Kodwa unokwenza inkqubo echasene nale post netafile ephezulu kakhulu
Kulungile I kukufumanisa kubangela umdla, njengoko ukuzisombulula, ndinengxaki andikwazi ukufumana isakhiwo ibhokisi (iibheringi kunye nemigama) of a xm MicroStation v8 polygonal kwaye realizadaen okanye v8i, njengoko kwenziwa Civilcad tebas polygon isixhobo kuphela kwaye unike ukwenza ukwakhiwa ibhokisi kunye pikes kwi kumzobo okanye pligonal, agredecira ukuba ndincede
Andiboni i-lisp eyenza loo nto, inokukunceda le nto . Ikhowudi ayinayo iphasiwedi, ngoko uyayiguqula ukuze ikunike enye inkcazelo, okanye uyishiye kwikholamu yokuqwalasela kunye nomsebenzi we-concatenate.
Ndiyabonga, kodwa ndicinga ukuba ndifuna ukucacisa into ethile, ndifuna ukuphepha ukuyenza ngesandla, ngokuzenzekelayo usebenzisa i-Lips, ukuba ndibe negrafu idatha engenisa iifayile ezigqwesileyo.
Ewe, ndiyayiqonda ukuba ukuba ngumgca nje, uyenze kuphela:
uze ubeke idatha ngeenyawo njengombhalo.
Ndiyawuncoma OKANYE Igalelo Q DAS SO LE PAGE INTERERESANTE. OKUHLE wayefuna ukwazi ukuba kunokunceda igrafu EZI idatha kuyo AutoCAD, ME ukrwele umgca BONKE ID ULWAZI, zilungelelanise TOP selayini, Ubude, Azimuth kunye Ukuthambekela (incl) ukusuka XY moya.
UNCEDO WAKHO UYA KUHLOLA.
I-ID ESEMPUMA EMNTLA UPHANDO NDE.” "AZIMUTH" "INCL."
InguHugo Alarcón uthi:
Ndiyavuyisana nawe, liphepha elihle kakhulu kwaye ngaphezulu kwako konke elinolwazi oluncedo kakhulu kuthi kuthi abazinikele kule ndawo kunye ne-geodey ...
Ndikhe ndajonga ulwazi onalo malunga nokusetyenziswa kwejografi (okanye i-gedesics) kunye ne-UTM ... Ndizabalaza kancinci ngokutshintsha kweGeographies ukuya kwiTopographic, oko kukuthi, ndifuna ukuguqula ukusuka kwi-geodeics ukuya kwinkqubo ethe tyaba, ngendlela amanqaku okanye ii-vertices esizibeke kwaye senza inkqubo yasemva kwenkqubo, singazisebenzisa ngesitishi esipheleleyo okanye nasiphi na isixhobo esiqhelekileyo kunye nokujonga umgama okanye ukuhambelana ... izimvo zakho ziya kuba luncedo kakhulu ... enkosi nemibuliso evela etampico, tamaulipas, mexico ...
kwaye ulungelelaniso lukwimihlaba okanye i-utm?
Abahlobo abalungileyo ndifuna ukwazi ukuba unako ukunceda njengoko ndikwazi ukudlulisa ukulungelelanisa kwi-GPS ukuya kwi-autocad
Ukuba bekukuloo nto, mhlawumbi kuya kuba kukukhangela kwipaneli yokulawula, indawo, kwaye ubone ukuba ii-commas zifana nabahluli bewaka kunye nepotimal decimal.
uyazi ndicinga ukuba ingxaki ilele kuqwalaselo lweekoma kunye namaxesha…. ukusuka kwi-excel
ahhhhhhhh iphepha elihle huh ...
kulungile enkosi, yonke into ivele ngokuzolileyo….
ubuyinyani isiphoso xa ukopa idatha ngokungachanekanga ... amawaka ombulelo ...
Hlola kakuhle umyalelo wento oyenzayo:
Umyalelo wendawo (okanye umgca)
Ukhetha indawo ekugqibeleni
Cofa kwilayini lomyalelo we-AutoCAD
musa ukwenza impazamo ngokuncamathisela idatha echanekileyo, kukho into eyenzekayo, apho ndinenye ifomathi kwi-excel eluncedo kakhulu kulungelelwaniso lwendlela, ifana kakhulu nale fomati kodwa kuzo zombini iimeko ndifumana lo myalezo "2d point okanye ukhetho". igama elingundoqo elifunekayo" ukuya kumhlaba we-autodesk, andiqondi?.
Ukuba ufuna ukudlulisa ifomathi ngokugqwesileyo bhala i-imeyile yakho….
Kuyathakazelisa kakhulu ..
AAA UKUBA UFUMANA ISISOMBULULO KULO MAGAZINI, Sasaza igama….
Ndinenye ifomathi efana nale, kukwenza ulungelelwaniso lwendlela kwaye uye kumhlaba we-autodesk, ifana kakhulu nale fomati, sele ndiyisebenzisile ifomathi endinayo kwaye isebenze kakuhle kum kwaye emva koko loo myalezo "2d point okanye igama elingundoqo elifunekayo" livele kwaye i-polygon yam ayibonakali, kwaye andenzi mpazamo ekukhupheleni idatha. UKUBA UYAFUNA NDIZOKUDLULA IFAYILE EKU-EXCEL BHALA I-IMEYILI YAKHO …….
I-AAA NCEDA UKUBA UFUMANE ISISOMBULULO, GQITHISA ILIZWI, ANDIZI UKUBA INGXAKI YOKULUNGISELELA I-CAD CAD OKANYE KUKHO INTO EPHELELAYO KWI-EXCEL….
UYoshuwa, ndiyakholwa ukuba ukopisha indawo engafanelekanga, kufuneka ukopishe oko kumatshintshi
Inqaku le-2d okanye igama elingukhiye elifunekayo liyavela kum kwaye andisifumani sisombululo ukuba uyasazi, nceda undincede, kungxamisekile, nceda …….
Ifayile egqwesileyo iya kundikhonza kakhulu kwaye sele ndibuza into ebendiyibuza malunga nendlela yokuguqula ukugcwala kwenqanaba kunye nenqanaba lokuwela kwi-UTM…. Ndiza kuvavanya ukuwela okuvulekileyo
Kungenzeka ukuba uye waphosisa ifomathi yamacandelo kunye namaphuzu, oku kufuneka uyiqinisekise kwipaneli yokulawula, ukulungiswa kwendawo. Kuya kusebenza kuwe ukuba unamaphuzu njengokuhlukana kwama-decimals kunye nama-commas njengokuhlukana kwamawaka.
Ndenza uvavanyo kwi-Autocad 2009 kwaye yasebenza kakuhle kodwa i-microstation ayikho
Kuya kuba andiyenzi into ethile kwi-Microstation V8 xm.
1. Umyalelo wePolline
2. ubhala i0,0
4. ikopi kwingingqi yelalanti yephepha eliphambili
5. nqakraza kumgca womyalelo
6. unamathisele okanye ctrl + v
7. sebenzisa ukujonga okupheleleyo
Ukuba ayisebenzi, into engaqhelekanga iyaqhubeka apho. Enye inketho enokuchaphazela iikhampasi zakho kunye namaphuzu adidekile kwiipropati zokuhlukanisa zamawaka kunye nama-decimals
YINTONI YOKUBA KUFANELE UKUFUNEKA UKUFUMANA KWI-COOPINATE YEZINGQUBO ZE-AUCTOCAD.
Xa uklikha Khuphela ndize ndiye NOKUBHALA ngoko ezikhethiweyo POLILINE 0,0 KUNYE UBONAKALA ESPECIFICQUE SIGTE LE INGONGOMA IT UBONAKALA [Arc / Halfwidth / Ubude / Susa / Ububanzi
Ndenjenjalo baza bayityeshela KODWA UBONAKALA LE PEGO (2D indawo ukhetho okanye igama efunekayo) Andazi INDLELA aparesca Polígon ungathanda ukwazi UKUBA Kofuneka nindixhase.
René, izilungelelaniso ziphuma ngenxa yokuba sithatha ulungelelaniso lokuqala.
HLAWULA I-CASTRO uthi:
Disemba, 2008 kwi
Ndicinga ukuba ezi zikhokelo asikwazi ukufumana i-utm zilungelelaniso kuba ezo zikhombisi azikho izilungelelaniso. negalelo elihle ekudibaniseni izicwangciso kunye ne-comma
En esi sithuba sibone indlela yokwenza ngenye indlela, ngokuqala ngamaphuzu.
Ispredishithi enhle kakhulu, enokwenziwa kwipoloni ephilileyo yenza itafile ngeRumbos, Azimuth, Distance, Azimuts kunye nesiseko esaziwayo?
I-Georeferencing ifayili ye-CAD